गर्मी शैली: न्यूनतम कटौतीको साथ लामो पोशाकहरू बेजिया
गर्मी शैली: न्यूनतम कटौतीको साथ लामो पोशाकहरू
मारिया vazquez | 19/07/2021 18:00 | मैले के लगाउने?
त्यहाँ कपडा छन् कि गर्मी को समयमा ठूलो सहयोगी बन्छ र हामी आज प्रस्तावित को लुगाहरु ती हुन्। उनीहरु लामो न्यूनतम पोशाक, डिजाइनहरूमा जहाँ त्यहाँ केहि छैन जुन ढाँचा आफैं र उनीहरूले बनाएको कपडा भन्दा बढी ध्यान आकर्षित गर्दछ।
यस प्रकारका कपडाहरूमा तपाइँ प्रवृत्ति आईटमहरू फेला पार्नुहुन्न जुन तपाईं अरूमा फेला पार्न सक्नुहुन्छ जस्तै फूलेको स्लीभहरू, रफलहरू वा साइड कट्स। यद्यपि तिनीहरूको स्पगेटी पट्टिहरू र सामान्यतया फ्रि-फिटिंग बान्कीलाई धन्यवाद, यी कपडाहरूले तपाईंलाई अधिकतम आराम प्रदान गर्दछ।
यस मौसमको चलन नै किन नहोस्, न्यूनतम कटौतीको साथ लामो पोशाकहरू जहिले पनि गर्मीको समयमा फेशन सlections्ग्रहमा उनीहरूको मार्ग पत्ता लगाउँदछन्। सरलता निस्सन्देह, यो त्यस्तो विशेषता हो जसले हामीलाई उनीहरूलाई यति धेरै बनाउँछ।
यसको ढाँचा को सरलता तिनीहरूलाई एक चिरस्थायी टुक्रा बनाउँछ जसमा हामी थकित नहुनु डराउदै साल बर्ष मोड्न सक्छौं। यदि, थप रूपमा, हामी तटस्थ रंगहरूमा डिजाइनमा शर्त लगाउँछौं: सेता, इक्रु, बेज वा कालो ... हामी सामानहरूसँग खेलेर तिनीहरूबाट धेरै प्राप्त गर्न सक्छौं।
En कपास, लिनेन, भिस्कोस वा हल्का वजन... यस प्रकारका लुगाहरू कपडाहरूको विस्तृत श्रृंखलाबाट बनेका छन्। टिनोहरू सबैभन्दा ताजा हुन्छन्, तर अन्य कपडाहरूमा बनेको भन्दा ती बढ्दछन्। यदि यो तपाईंको लागि समस्या होईन, किनकि यो मेरो लागि होईन भने, ती मध्येका सबै भन्दा राम्रो विकल्पहरू मध्येका सबैभन्दा लोकप्रिय दिनहरू हुन्।
न्यूनतम कटौतीको साथ ड्रेसको संयोजन जुन हामी आज प्रस्ताव गर्छौं एकदम सरल छ। तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको केहि थप्नुहोस् समतल चप्पल, झोला तपाईले आफ्नो काँधमा झुण्ड्न सक्नुहुन्छ अधिक सान्त्वनाका लागि, साथै टोपी र / वा चश्मा जसले तपाईंलाई सूर्यबाट बचाउँछ।
छविहरू - @ mirenalos, walkinwonderland, isonlisonseb, @ फ्री_थेलबेल, harperandharley, alexisforeman, @MSwells, loveclothblog, @andyheart
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » फेसन » मैले के लगाउने? » गर्मी शैली: न्यूनतम कटौतीको साथ लामो पोशाकहरू
एक राम्रो फुटरेस्ट छनौट गर्नुहोस् र आराम प्राप्त गर्नुहोस्
चन्द्रमाको डाईट, यो के हो र यसले कसरी कार्य गर्दछ